Masinina vato, milina fanoratana vato - Joborn
ny milina vato sinoa
Masinina manapaka vato
Masinina famolavolana vato
Milina fanoratana vato
Masinina vato hafa
Ny kalitao voalohany dia ny tanjon'ny orinasanay dia nanangana sampana fanaraha-maso kalitao matihanina ny orinasa, fitaovana miaraka amin'ny fitaovana fandrefesana fandrosoana iraisam-pirenena, fizotran'ny fitsapana henjana, manomboka amin'ny fividianana akora hatramin'ny trano fitehirizam-bokin'ny vokatra.
JOBORN MACHINERY CO., LTD. toerana ao amin'ny "tanàna vato any Shina" -china, shuitou, dia miaina faritra sahabo ho 60 hektara, miaraka amin'ny zavamaniry maoderina maherin'ny 20 000 metatra toradroa ary mihoatra ny 4000 metatra toradroa ny tranon'ny fitantanana, dia fikarohana sy fampandrosoana, famokarana, varotra ary serivisy amin'ny iray amin'ireo mpanamboatra fitaovana famokarana vato. Nanangona harena maro niainana, teknolojia mahafinaritra ary serivisy manodidina ny halavirany dia manome antoka fa nahazo laza malaza eo amin'ny tsena ny orinasa.
Kitiho raha te hahalala bebe kokoa
Olona miompana amin'ny olona, ​​kalitao hahatafavoaka velona, ​​Handresy am-pahamendrehana, drafitra vaovao handoavana mihoatra ny 20 taona ny traikefa manankarena, ny haitao mahafinaritra ary ny serivisy manodidina ny aotra dia manome antoka fa nahazo laza tsara eo amin'ny tsena ny orinasa.
Injeniera teknika matihanina natokana hitarika anao
Safidio ny fomba famolavolana sy drafitra fandaminana amin'ny ankapobeny araka ny filanao marina
Hailian Pioneer Park, Shuitou Town, Tanànan'i Nan'an, Faritanin'i Fujian